Kutaa Duraa (04. 10. 15)
Kunoo, gooroon sun bakka amma keessa deemaa jirtani. Silaa Meettaa, Meettaa keessaa Meettaa Hoolotaa keessa akka deemaa jirtani beektuu laata? Ee, Meettaa biyya qeerransootaa, biyya Ordofaa Cangaree, biyya Cangaree Sookilee! Kunoo, wantee 45 irratti magaalaa Hoolotaa (3) – seentanii jirtu. Biyyi, biyya hoolotaa-tii egaa foon hoolaa kashakkasaa! Daadhiis irratti basshabbashaa! Karaan inni as irraa ka’ee gara kaabaatti, gara fuula Salaaleetti qajeelu karaa isa magaalaa simintoo, magaaalaa Mogor (4) – nama geessu. Naannoo Meettaa Hoolotaa irraayyi gara naannooMeettaa Roobii-tti ceetu jechaa dha. Maarree Meettaa biyya jagna durii, biyya Birraatuu Goolee! Waraana Adowaa isa warri Amaaraa ittiin-dhaadatan sana irratti kanneen Xaaliyaanii haleelaa turan jagnoota Oromoo: Gabayyoo Gurmuu, mootii Oromoo Walloo abbaa Iyyaasuu, jechuun Mahaammad Alii, Baalcha Abbaa Nafsoo fi Birraatuu Goolee fayi. Haatahu malee, Mogor gaafa biraa dhaqxuu amma bakkuma kaataniif gara Ambootti xuruuraa!